Ọnụahịa na ndụmọdụ maka ịtọlite ​​ụlọ ahịa ntanetị PrestaShop | ECommerce ozi ọma
Ọ bụrụ n’ikpebie imelite azụmahịa gị ma chọpụta ohere ịntanetị na-enye, a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Ọ ga-abụrịrị ihe kachasị mkpa gị. Ihe mbụ ị ga-atụle bụ ọnụahịa nke azụmahịa ịntanetị, kpọmkwem na Ecommerce ikpo okwu na-eri iji
N'echiche a, anyị chọrọ ịgwa gị maka ọnụahịa nke a PrestaShop online ụlọ ahịa,, ebe ọ bụ na nke a bụ otu n'ime ụlọ ahịa n'ịntanetị kachasị ewu ewu taa. N'ihi na ọtụtụ ndị ọchụnta ego bụ ndị bu n'obi ịmepụta a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka azụmahịa gị, Sọftụwia a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe ijikwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe omume agaghị aghọrọ ma ọ bụghị.
1 Ike nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
2 Zụta ngalaba, were ụlọ ọrụ weebụ
3 Ebe Ntanetị nke Ahịa Online
4 Akwụ ụgwọ maka imewe nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na PrestaShop
5 Modul iji melite ụlọ ahịa ahụ
6 Ọnụahịa PrestaShop dị njikere
7 Ọnụ ndị ọzọ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Ike nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Ọ dị iche ire ngwaahịa gị n'ụlọ ahịa anụ ahụ karịa ịme ya site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Iji chọpụta ma azụmahịa gị ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na weebụ, ọ dị mkpa iji mepụta a enwere ike nyocha, nke ọ dị mkpa iji tụlee nhazi na ọrụ mmadụ, mepee ọmụmụ ahịa ma nyochaa nsonaazụ ya.
Ihe a niile gụnyere ụgwọ, nke a ga-agbakwunye na ụgwọ ndị ọzọ nke inwe ụlọ ahịa n'ịntanetị na nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru.
Zụta ngalaba, were ụlọ ọrụ weebụ
Otu n'ime isi akwụ ụgwọ metụtara Ọnụahịa ụlọ ahịa PrestaShop n'ịntanetị ọ bụ kpom kwụrụ ngalaba. Dị ka ị maara nke ọma, ngalaba ahụ bụ aha pụrụ iche nke ekenyere na ibe weebụ yana nke na-achọpụta ma na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta otu Adreesị IP na Internetntanetị.
Yana ịzụta ngalaba aha gị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ dịkwa mkpa nkwekọrịta ọrụ nnabata web, ebe kpomkwem na saịtị a ga-kwadoro.
Ugbu a ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ndị na-ere ngalaba aha maka n'agbata € 10 ruo 25 kwa afọ, ebe enwere ike ịgbazite ọrụ nlekọta weebụ site na € 2,60 kwa ọnwa
Ebe Ntanetị nke Ahịa Online
Nke mere na ị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na PrestaShop na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-enye nhọrọ ka ndị ahịa gị wee nwee ike iji kredit ma ọ bụ kaadị debit kwụọ ụgwọ.
Ya mere, ọ dịkwa mkpa ịgbakwunye ọnụ na-akwụ ụgwọ ebe ire ere ere nke ahụ na-enye ụzọ echedoro ịkwụ ụgwọ.
Ahịa dị iche na-adabere n'akụkụ nke ọ bụla, agbanyeghị ihe a na-ahụkarị bụ na ị ga-etinye ihe ruru € 20 kwa ọnwa maka mmezi.
Akwụ ụgwọ maka imewe nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na PrestaShop
Otu n’ime ndị bụ isi iji kee a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na PrestaShop ọ nwere na eziokwu na ị nwere ike ịnweta a otutu Gburugburu ma ọ bụ ndebiri iji chepụta saịtị gị n'ụzọ kachasị amasị gị.
Nwere ike ịchọta ndebiri PrestaShop maka otu isiokwu maka € 59 ma ọ bụ ruo € 89.
También están disponibles otutu modulu ka iwelie oru nke weebụsaịtị gi na uzo di ka ibawanye ahia, inweta otutu mgbanwe, imeziwanye uzo, mbu ahia na ngwa oru, ochichi, ugwo, wdg.
Modul iji melite ụlọ ahịa ahụ
Akụkụ ọzọ na pụta ìhè na PrestaShop bụ na o nwere ihe karịrị modulu 3.000 nke na-enye ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ọtụtụ ọrụ, n'ụzọ ị nwere ike ịhazi ọtụtụ ihe dị na ya, yana melite akụkụ dị iche iche, gụnyere iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Modulu ọ bụla nwere ụgwọ dị iche iche dabere na ọrụ na arụmọrụ ha na-enye. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa ịmara bụ nke ahụ PrestaShop modul Ha dị mkpa iji nwekwuo arụmọrụ nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma kwalite mmepe ya.
Dịka anyị kwurula, enwere ọtụtụ PrestaShop modul dị, ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị atụ aro bụ ihe ndị a:
SEO ọkachamara modul. Ọ bụ modul nke ezubere iji mee ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ịchọta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe site na engines ọchụchọ na nyiwe mmekọrịta mmadụ. Ọnụ ego nke usoro PrestaShop a bụ ihe ruru € 181.
Email ahịa modul. Ọ bụ modulu dị oke mkpa ebe ọ bụ na ị nwere ike iweli ọnụego ntụgharị nke Ecommerce gị ma n'otu oge ahụ ọ ga - enyere gị aka ijide ndị ahịa. Ọ bụ usoro nke ị nwere ike ịgba ndị ahịa gị ume ịlaghachi n'ụlọ ahịa gị ọzọ, ị nwere ike iji ya maka mgbasa ozi nkwado na mbelata ego.
Agbahapụkwa ụgbọ modul. N'okwu a, ọ bụ usoro bara ezigbo uru ebe ọ bụ na oge ọ bụla ndị ahịa gị hapụrụ ụgbọ ahịa, ha ga-enweta otu ncheta ma ọ bụ karịa site na ozi email ahaziri iche. Usoro a ga - enyere gị aka melite ọnụego ntụgharị na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, ị nwere ike iji ya nye ego na ozi ịntanetị na - akpali ndị ahịa iji mezue usoro ha. Ọnụ nke usoro a bụ ihe dịka € 145.
Ọnụahịa PrestaShop dị njikere
Na PrestaShop Ready akụkọ Ọ bụ otu n'ime ihe ngwọta Ecommerce dị mfe ma dị mfe iji mee ihe gbasara njikwa yana achọghịkwa ihe ọmụma teknụzụ dị elu.
Nke a mbipute ọhụrụ nke emelitere na nke ka mma nke PrestaShop Ebumnuche ya maka obere azụmaahịa, FreeLancer, freelancers ma ọ bụ SME, ọ bụ ezie na n'ozuzu ọ dabara adaba maka onye ọ bụla chọrọ ịmepụta azụmaahịa na ịntanetị.
Ugbu a naanị atụmatụ atọ dị na enwere ike ịnweta: Star, Pro na adịchaghị.
Younwere ike ibute atụmatụ Star maka € 19,90 kwa ọnwa na ọnụego na-enweghị ụtụ isi na maka ọnụahịa a ị nwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ a na-akparaghị ókè nke akụkọ ejiri, ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe, yana ị nwere ike ịnweta karịa ọrụ 600 , ohere ibupu data, ihe eji ahaziri iche, ọbụlagodi ụdị nke PrestaShop dakọtara na ikpo okwu ekwentị.
A na-enyekwa PrestaShop Ready na blọọgụ, akwụkwọ akụkọ na - akwụghị ụgwọ maka ihe ruru 12.000 kwa ọnwa, nkwado na - enweghị ngwụcha na - akparaghị ókè, nkwado maka ịkwụ ụgwọ site na kaadị ma ọ bụ site na akaụntụ PayPal, zitere site n'aka ndị isi, na-eweta na Google Cloud Platform, ọbụnadị nwere SSL nche akwụkwọ. N'ezie software a iji mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ asụsụ na ọtụtụ asụsụ
Obu ihe kwesiri ekwusi na ugbua, PrestaShop Jikere Enwere ike iji ya n'efu maka ụbọchị 15 na-enweghị ụdị ntinye ọ bụla na enweghị inye nkọwa kaadị akwụmụgwọ gị. Ozugbo usoro ikpe ahụ gwụchara, ị ga-enwe nhọrọ nke ịnyefe otu n'ime atụmatụ ndị ahụ ekwuru na ịkwado na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma yana nsonaazụ kacha mma.
Ọnụ ndị ọzọ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
La zuo nke PrestaShop software Ọ bụghị naanị ụgwọ metụtara ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Tinyere ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, ọ dịkwa mkpa ịtụle mmefu ndị ọzọ ga-eme ka nkwa azụmaahịa ka mma. N'ime ha anyị kọwara ihe ndị a:
Nchọpụta njin ọchụchọ (SEO). Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ndị ọbịa na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị yana ndị ọbịa ahụ zụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ọ dị mkpa iji mejuputa mkpọsa igwe nchọta maka Ecommerce gị. E nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ SEO na ụlọ ọrụ ndị na-akwụkarị ụgwọ n'etiti € 300 ruo per 500 kwa ọnwa.
Ahịa Injin Ọchụchọ (SEM). Ọ bụkwa ego ọzọ ị ga - agbakwunye na ụlọ ahịa PrestaShop gị na nke ahụ metụtara ntugharị na mkpọsa mgbasa ozi dị iche iche ejiri Google Adwords mee. Ihe a niile nwere ike iru ọnụ ahịa ihe dị ka € 300 ruo € 5.000 kwa ọnwa.
Obi abụọ adịghị ya na PrestaShop bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma iji mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetịAgbanyeghị, ọ bụghị naanị ụgwọ ị ga-eche ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ka azụmahịa gị n'ịntanetị nwee ọganihu ma nye gị nsonaazụ ịchọrọ.
Ikwesiri iburu n'uche na enwere uzo ozo ndi ozo di oke nkpa maka ulo ahia gi, tinyere ngalaba aha, Ọ bụ ezie na enwere nhọrọ efu, ọ naghị adaba, ọkachasị mgbe ihe ị na-achọ bụ ịkwalite akara gị. Ọ dịkwa mkpa ka ị chọta ọrụ ọrụ nlekọta weebụ na-arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya ka ụlọ ahịa ịntanetị gị nọrọ n'ịntanetị mgbe niile.
N'ezie anyị agaghị echefu banyere PrestaShop modul, nke ga - enyere gị aka melite arụmọrụ nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị n'ọtụtụ akụkụ. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-etinye atụmatụ ahụ site na ịzụta ndebiri, nke site n'ụzọ ị nwere ike ịchọta ha n'ọtụtụ edemede, yana SEO na SEM ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Tụle ihe niile dị n'elu, ọnụahịa nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị PrestaShop O nwere ike ịbụ site na € 1.500 ruo € 3.000, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ a nwere ike ịdị iche na ịrị elu dabere na mkpa nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị.
Ka anyị ghara ichefu na a ga-enyerịrị okwu metụtara mmezi, nke a ga-arụ kwa oge iji hụ na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-anọgide na-arụsi ọrụ ike ma nweta ndị ahịa gị niile, n'agbanyeghị ngwaọrụ ha ji.
N'ọnọdụ ọ bụla anyị na-atụle nke ahụ ọnụahịa nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na PrestaShop ọ bụ ihe ziri ezi na-atụle atụmatụ na ọrụ niile ọ na-enye anyị.
Site na nchịkọta katalọgụ nke na-enye gị ohere ijikwa ndepụta dị egwu nke ngwaahịa gị, iji gosipụta ihe niile ị na-ere n'ụzọ pụrụ iche ma nye ndị ahịa gị ọtụtụ nhọrọ ka ha wee lelee ngwaahịa ha na-achọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Ọnụahịa ụlọ ahịa PrestaShop n'ịntanetị